Global Voices teny Malagasy · Oktobra 2009
Mey 2022 38 Lahatsoratra
Novambra 2021 50 Lahatsoratra
Tantara misongadina tamin'ny Oktobra 2009
Fitondrana vohoka sy ny fonja: Ny fahasalamana sy ny zon'ny vehivavy voafonja
Mbola tolona hatramin'izao ny hiantohana ny zon'ny vehivavy bevohoka manerantany, ary raha tarafina aza, dia voaramaso [ara-pahasalamana?] tafahoatra matetika ny vehivavy bevohoka voafonja. Inona avy moa ny dingana efa vita hanamarihana fa voakarakara tsara izy ireo, miaraka amin'ny [menaky ny] aina entin'izy ireo?
Blog action day 2009: Miresaka momba ny fiovaovan'ny toetr'andro ireo tetikasa vatsian'ny Rising Voices
Androany [15 oktobra] no Blog Action Day ary kendren'ity hetsika isan-taona ity ny hanambarana ny mpamaham-bolongana manerantany hanoratra lohahevitra tokana mba hampahafantarana sy hanentanana izao tontolo izao hiresaka ilay lohahevitra. Misy amin'ireo mpikambana ao amin'ny Rising Voices ary no nandray anjara tamin'ity hetsika ity ka entinay aminareo etoana ny fantina...
Porto Rico: Vonona ho amin'ilay fitokonana nasionaly
Mivonona ho amin'ny fitokonanana nasionaly hatao amin'ny Alakamisy 15 Oktobra, izay mikendry ny hampikatso ny firenena mandritra ny andro iray i Porto Rico sy ny mpitoraka blaogy ao aminy.
Amerika Avaratra26 Oktobra 2009
Cote d'Ivoire21 Oktobra 2009
Amerika Latina18 Oktobra 2009
Tantara tamin'ny Oktobra, 2009
Honduras: Hanomboka hifarana ny krizy?
Amerika Latina 31 Oktobra 2009
Eo ampelatanan'ny Kongresy ankehitriny ny fifanarahana, izay mety ekeny, ny amin'ny hamerenana ny filoha Hôndiorianina Manuel Zelaya eo amin'ny toerany indray fa hifampizarana kosa ny fahefana, ka mety hidika izany fa manomboka hifarana ny krizy.
Etazonia: Mpifankatia tsy mitovy fihodirana tsy nahazo nisora-panambadiana
Amerika Avaratra 31 Oktobra 2009
Tamin'ny herinandro, tany Hammond, any Louisiana, Beth Humphrey (fotsy hoditra) sy Terence McKay (mainty hoditra) dia nangataka fisoratam-panambadiana ary nolavina noho ny tsy fitovian'ny fihodiran'izy ireo. Ny Mpitsara misahana ny fandriampahalemana, Keith Bardwell, dia nanambara fa araka ny efa hitany dia “tsy maharitra ny fanambadiana eo amin'ny olon-droa tsy mitovyfihodirana” ary nolazainy fa “ho an'ireo taranaka no nanaovany izany.”
Kazakhstan: Fifanoheran-kevitra ara-ekonomika, fanavakavahana araka ny maha-lahy na vavy ary ny fitotonganan'ny siansa
Azia Afovoany sy Kaokazy 31 Oktobra 2009
Manohy ny resaka momba ny fifandraisana ara-sosialy ireo mpitoraka blaogy any Kazakhstan. Tamin'ny herinandro lasa teo, ny adihevitra teto amin'ny aterineto dia nampiseho lohahevitra samihafa. Ny mpitoraka blaogy Lord-Fame dia novangian'ireo tomponandraikitry ny hetra izay nanambara fa tsy ampy araka ny tokony ho izy ireo mpiasa ao amin'ny orinasany, ambanin'ny...
India: Mpanao gazety mpitoraka bilaogy nanelanelana hanavotana polisy takalon'aina
India 28 Oktobra 2009
Tao amin'ny fanjakan'i Bengal andrefana dia nisy ady nifanandrinan'ny mpioko maoista(Naxalites) sy ny miaramilam-pirenena. Noraran'ny fitondrana tamin'ny volana jona lasa teo ny Antoko Komonista Indiana (Maoista), antoko miafina sady tsy manana solontena ao amin'ny antenimiera, noho ny lalàna mandrara ny hetsika tsy manara-dalàna ka nanondroany io antoko io ho fikambanana...
Repoblika Dominikana: Hetsika fampahalalana ny homamiadana
Amerika Latina 28 Oktobra 2009
Volan'ny fisorohana ny homamiadan'ny nono any amin'ny firenena maro ny volana oktobra, fotoana ankalazain'ny vohikala manandaza, fandaharana manokana amin'ny fahitalavitra, famakian-teny, valandresaka ara-medikaly ary ny fizarana boky kely sy trakitra misy izay tsara ho fantatra. Ireny rehetra ireny dia manindry manokana ny amin'ny fizahana ataon'ny tsirairay sy ny mampiahiahy tokony...
Israely: Horonantsary maneho ny olan'ny fanakatonana ireo sisintanin'i Gaza
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Oktobra 2009
Eo amin'ny tontolon'ny blaogy Israeliana, tsy dia tsapantsika loatra hoe misy mihaino na dia tsy misy miteny aza, izay no nitranga tamin'ny fanombohan'ny sarimihetsika fohy antsoina hoe “Closed Zone.” Sarimihetsika maharitra 90 segondra momba ireo faritra fivezivezena nohidiana any Gaza, “Closed Zone” izay efa in-31.600 nojerena ary ahitana tsikera 200...
Tao amin'ny fetiben'ny mpamaham-bolongana indoneziana
Indonezia 27 Oktobra 2009
Nitsidika ny fetiben'ny mpamaham-bolongana indoneziana na PestaBlogger 2009 izahay. Ity no fanintelony nanaovana ity fihaonana isan-taona ity. Avy any amin'ny vazantany efatra ao amin'ity firenena lehibe iray ity ny mpamaham-bolongana ka namonjy an'i Jakarta renivohitra, hankalaza, hiady hevitra ary hanala azy [hivory].
Tonizia: Fifidianana madio sy tsy mitongilana?
Tonizia 27 Oktobra 2009
Araka ny efa tsikaritra mialoha dia nandresy tamin'ny fifidianana toniziana indray ka hitantana fanindiminy ny firenena ny filoha Zine Al Abidine Ben Ali. Ny tsy nantenaina dia ny 89.69%n'ny vato rehetra azony. Ny faminavinana manko dia nametraka fa tokony hahazo vato bebe kokoa noho io izy. Tafavoaka tsara ihany koa...
Isiraely: “fanavakavahana tsotsotra” amin'ny fitateram-baovao
Israely 27 Oktobra 2009
Eo ho eo amin'ny 20%-n'ny mponina, ireo Palestiniana mizaka ny zom-pirenena Isiraeliana (antsoina ihany koa hoe Arabo Isiraeliana) no milaza fa voavakavaka amin'ny sehatra maro eo amin'ny andaanandrom-piainana. Nanery am-panahy mpamaham-bolongana Palestiana iray any Isiraely ny fomba fitantaran'ny haino aman-jery lozam-piarakodia niseho vao haingana. Ny mpamahana ny bolongana The Other...
Lahatsoratra Grika momba ny Blog Action Day ‘09
Gresy 27 Oktobra 2009
Ny tanjon'ny Blog Action Day amin'ity taona ity dia ny hanairana ny fahatsiarovan-tena momba ny fiovaovan'ny toetr'andro. Maherin'ny 150 no mpitoraka blaogy Grika nanoratra anarana handray anjara.